Joba, lehilahy marina sy mahitsy
"Efa renareo ny faharetan’i Joba, ary efa hitanareo ny faran’ny nataon’ny Tompo taminy, fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindrampo."Jakoba 5:11
Ny bokin’i Joba dia maneho ny fandehan’ny eritreritry ny mpino iray mandalo fijaliana sady maro karazana no tsy dia fahita firy. Joba dia lehilahy “marina sy mahitsy”, natahotra an’Andriamanitra (izany hoe nanaja fatratra sy natoky tanteraka Azy). Nifady ny ratsy i Joba, nanao soa tamin’ireo mijaly sy ireo mahantra. Ka raha ny tena izy, dia tsy tokony ho nandalo fijaliana mavesatra toy izany izy. Indray andro anefa dia nitsimbadika ny zava-drehetra: fongana ny fananany, maty ny zanany, ary tonga ny tsy fahasalamana.
Nanaiky izany rehetra izany i Joba, hany ka voatery niaritra ireo teny manozongozona nataon’ny namany, nefa dia ny mba haneho fiaraha-miory aminy no nahatongavan’izy ireo. Nandritra ny andro maro izy ireo dia niezaka nandresy lahatra an’i Joba hoe matoa izy, izay mpino, no zahana toetra toy izany, dia satria nanao zavatra ratsy. Dia io izy, niharan’ny safeli-teny sy fanomezan-tsinin’ireo namany. Ny miaro tena, sy tsy maintsy manohitra isanandro ireo rijan-kevitra sy fiampangana, dia fitsapana mbola lehibe kokoa ho azy, mihoatra noho ilay areti-mandoza.
Tsy niala tamin’Andriamanitra mihitsy i Joba. Tsy nihafahafa izy nanambara taminy ireo fanontaniany, ireo fitarainany, ireo zavatra nandratra azy, sy heveriny fa tsy rariny. Tamin’izany lalana feno fangirifiriana izany, dia teo hatrany Andriamanitra, tamin’ny fomba tsy takatry ny saina, nikendry izay hahasoa an’i Joba. Andriamanitra, Izay fantatsika ankehitriny amin’ny maha Ray Azy, dia eo anilantsika ihany koa rehefa mijaly isika, ary te haneho ny tenany amintsika, toy izay nataony tamin’i Joba, izay niteny nony farany hoe: “Fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita Anao” (Joba 42:5).